laser denim wokuhlamba nokukrola - Wuhan Golden Laser Co., Ltd
laser denim wokuhlamba mfanekiso
Denim Laser Ukugeza mfanekiso Solutions
Ijini / T-Shirt / Impahla / Jacket / Corduroy
Yintoni ukwenza laser wokuhlamba mfanekiso?
Denim Mfundi umbhalo / Whisker / Monkey ehlanjiweyo / Gradient / yokuqangqulula / ukulungele-to-ukunxiba 3D mfanekiso creative
I ezintsha uzobe olwenziwe kushishino yokuhlamba denim - denim laser ngentlabo , Lelona laba yintloko iteknoloji mainstream eYurophu.
inkqubo laser ukuhlamba denim na imo processing kunye automatic. It ungaziphumeza kuphela ngebrashi ngesandla, whisker, inkawu ayihlambe, wazikrazula kwinkqubo yemveliso yemveli, kodwa sebenzisa laser ukuba babhale imigca, iintyatyambo, ubuso, iileta kunye manani, ebonisa iziphumo zobuchule. It ungaziphumeza nje ibhetshi processing of inkqubo wokuhlamba iimpahla, kodwa ukukhawulelana mkhwa emarikeni ngokwakho ulwenziwo kwibhetshi encinane.
buhle bayo ngaphezu
Hand Traditional Brush
Omnye umatshini indawo abasebenzi ezintlanu. Lo mshini nokuhambisa ngokupheleleyo nangokufanelekileyo.
Iintlobo ngeentlobo iinkqubo ezintsonkothileyo, ezifana whisker, whisker 3D, inkawu ayihlambe, ithambeka, wazikrazula, yaye naziphi na eziyiliweyo zobugcisa, nje laser ukuze ngokulula.
Phendula ngokukhawuleza uphuhliso lwemveliso ezintsha, kwaye intsingiselo ilawulwa ngexesha lenene.
Traditional umsebenzi wezandla, umgangatho kunzima ukulawula. Imveliso laser, nokukrola ugqibile kunempembelelo engaguqukiyo kakhulu, umgangatho oluchanekileyo kwaye uzinzile.
nendleko eziphantsi yokusebenza
technology yaseYurophu, oluzinzileyo noluthembekileyo, ezincinci iindleko zokusigcina, kufuneka kuphela kWh 7 ngeyure nganye.
Laser OMKHULU - inkqubo wokuhlamba nokukrola Laser kulukhetho ilungileyo ukunyusa ingeniso yemveliso denim ilaphu.
yokonga amandla kunye nokusingqongileyo
iinkqubo zemveli kudla isixa esikhulu wezenzi imichiza, kunye ageze ezininzi kubangela inkunkuma yamanzi, kwaye athuthwe kuyingozi kokusingqongileyo. wokuhlamba laser ugqibezela iziphumo ezahlukeneyo ijini ngeyona ndlela elula, ukuphucula kwindawo yokusebenza, okonga umbane kunye nokhuselo lokusingqongileyo.
ukuhlamba laser idibanisa kunye neendlela ezithile emveli ukwenza isiphelo eliphezulu-Boutique denim ekhethekileyo.
inkqubo wokuhlamba umbhalo laser kukhokelela kuphela ishishini elihambisayo denim, kodwa esenza izicelo ezifana yesikhumba, iibhatyi, T-shirt, nezambatho corduroy, kwaye ukusebenza ebanzi ukuba izinto ezahlukeneyo textile kunye isambatho. 2D / 3D isiphumo nokukrola yokuyila iphucula indawo ebanzi ixabiso le mveliso.
Laser Ukuhlamba mfanekiso System
Le nkqubo YOKUHLAMBA nokukrola laser esixhotyiswe ngokukodwa ABE FOR ijini KUNYE denim ezimhlophe mfanekiso.
Denim laser bokuhlamba kunye nenkqubo ngentlabo, umgaqo yayo yokusebenza ukusebenzisa ikhompyutha ukuyila, uyilo, uze wenze PLT okanye BMP iifayile, uze usebenzise CO2 umatshini laser, nokukrola ukwenza laser umqadi iqondo lobushushu eliphezulu ukuya ngasekhohlo phezu kweengubo ilaphu ngokwemiyalelo computer . Vulu phantsi lobushushu eliphezulu ukuya ngasekhohlo na ablated, idayi iya vaporized, kunye ezinzulwini ezahlukeneyo ngasekhohlo benziwa ukuvelisa ipateni okanye enye ukusebenza ukuhlanjwa. Ezi Iipateni kwakhona zinokuhonjiswa ezimfakamfele, sequins, ukolulwa kwempahla, kunye izincedisi zesinyithi ukwandisa isiqhamo sobugcisa.
Okunye ngale mveliso
software Professional, kulula ukuba ukusebenza, kulula ukuba ukuguqula nemizobo ngalo naliphi na ixesha.